Grace Mugabe roils Zim political scene | IOL News
Africa / 29 August 2014, 9:10pm / SAPA
FILE - Zimbabwean president Robert Mugabe, left, and his wife, Grace.
Harare, Zimbabwe - She has expensive tastes, owns a lot of land in Zimbabwe and is now entering politics, a move that is roiling this southern African nation that has known only one leader since independence: President Robert Mugabe, who is 90 years old.
The ZANU-PF Women's League said they hope Mrs. Mugabe can advance women's issues and help heal factionalism because she has “the president's ear.”
Vice President Joice Mujuru and Justice Minister Emmerson Mnangagwa -both veterans of the country's 1970s liberation war - have been long-time front runners to replace Mugabe.
A member of the ZANU-PF Youth League from Harare lodged a police report over the weekend, alleging he had been assaulted by fellow party members for backing Mrs. Mugabe. On Monday, Mugabe's close nephew and ZANU-PF politician Patrick Zhuwawo claimed there was a plot to “push” Mrs. Mugabe from Harare by disgruntled party members who want to “relegate the First Family to the Zvimba (Mugabe's home village)”.
“This phase will pass after the congress,” he said, referring to a December congress in which the president will have the final word on his wife's appointment as Secretary of the Women's League of ZANU-PF.
“It is our right as ZANU-PF to choose President Mugabe to lead the country and the first lady to lead the Women's League,” Nguni said.